दोश्रो गार्डेन कपमा शुक्रबार क्वाटरफाइनलका खेलहरु हुने - Pokhara Sports
खेलक्षेत्रको विकास गर्न संघसंस्थासँगको सहकार्य र साझेदारीमा जोड
एन्फा टेक्निकल सेन्टरको टेन्डर आह्वान संगै छायो खुसियाली
आहा ! रारा गोल्डकपमा मनाङ ५० औं खेल खेल्दै !
मोरिससविरुद्धको खेलमा नयाँ अनुभव बटुल्छौं’–कप्तान किरण लिम्वु
Home/अन्य खेलकूद/दोश्रो गार्डेन कपमा शुक्रबार क्वाटरफाइनलका खेलहरु हुने
दोश्रो गार्डेन कपमा शुक्रबार क्वाटरफाइनलका खेलहरु हुने
पोखरा स्पोर्टस Send an email १५ फाल्गुन २०७६, बिहीबार १८:४९
पोखरा, ड्यामसाइड क्लव, मेरो नेपाल, संगम एफसी, बिटी क्लव, एलजी एशोसिएसन, गार्डेन युवा क्लव ‘ए’ र मालेपटन पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पताल खेल मैदानमा दोश्रो संस्करणको गार्डेन कप सेभेन ए साइड फुटवल प्रतियोगिताको क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गरेका छन् । बिहीबार भएको प्रि क्वाटरफाइनल खेलमा जित हाँसिल गर्दै ति क्लवहरुले अन्तिम आठमा आफ्नों स्थान बनाएका हुन् ।
गार्डेन युवा क्लवद्वारा आयोजित प्रतियोगिता अन्तर्गत बिहीबारको पहिलो खेलमा ड्यामसाइडले युनाइटेड एफसीलाई ४–० गोलले पराजित गरेको थियो । खेलमा ड्यामसाइडका सुनिल विकले २ तथा रबि थापा र संजिब बुढाथोकीले १-१ गोल गरे । अर्को खेलमा मेरो नेपालले भ्यालि स्पोर्टस क्लवमाथि २–१ को जित निकाल्यो । मेरो नेपालको तर्पmबाट प्रदिप गुरुङ्ग र सौरभ कार्कीले समान १-१ गोल गरे भने भ्यालिका विजय गुरुङ्गले १ गोल गरेका थिए । संगम एफसीले भने ब्रदरहुडमाथि ७–१ को फराकिलो जित निकाल्दै क्वाटरफाइनलको बाटो खुलायो । संगमको जितमा बेलप्रसाद गुरुङ्ग एक्लैले ५ गोल गरेका थिए । सुमित श्रेष्ठ र सुनिल घोतानेले पनि एक एक गोल आ–आफ्नों नाम गराए ।
बिहीबारनै भएको प्रतिस्प्रधात्मक खेलमा बिटी क्लवले टाई ब्रेकरमा बाजि मार्दै क्वाटरफाइनलको यात्रा तय गर्दा एम–१२ प्रतियोगिताबाट बाहिरियो । निर्धारित समयको खेल १-१ गोलको बराबरीमा सकिएपछि टाई ब्रेकरमा बिटी ३–२ गोलले विजयी भएको हो । त्यस्तै, एलजी एशोसिएसनले स्याँग्जा अभियान क्लवलाई ५–० गोलले पराजित ग¥यो । खेलमा एलजीका सिन्कमान तामाङ्गले ह्याट्रिक गरे भने विजय गुरुङ्ग र रमेस मगरले पनि १-१ गोल गरे ।
आयोजक गार्डेन विदेशी खेलाडीको निर्णायक गोलको मद्धतमा अन्तिम आठमा प्रवेश ग¥यो । खेलमा अफ्रिकन मुलका खेलाडी एलेक्सले पहिलो हाफमा गरेको एक गोलनै निर्णायक गोल बन्दा त्रिशक्ती ‘ए’ लाचाहोकले पनि प्रतियोगिताबाट विदा लियो । अन्तिम खेलमा मालेपाटनसंग ३–२ ले पराजय व्यहोरेसंगै त्रिशक्तिको ‘बि’ टिमपनि प्रतियोगिताबाट बाहिरियो । प्रतियोगिता अन्तर्गत रन्जन मेमोरियलले यसअघिनै क्वाटरफाइनलमा स्थान बनाइसकेको थियो । शुक्रबार क्वाटरफाइनलका खेलहरु हुने आयोजक गार्डेन युवा क्लवका अध्यक्ष विनोद गुरुङ्गले जानकारी दिए ।
१५ माघ २०७८, शनिबार १२:५५
१५ माघ २०७८, शनिबार ११:०४
१५ माघ २०७८, शनिबार ०९:५२
१४ माघ २०७८, शुक्रबार २०:०१
१४ माघ २०७८, शुक्रबार १८:०५
© Copyright 2022, All Rights Reserved | Pokhara Sports by FewaCloud